हुन्डाईले सधै सुधारात्मक फिचरका साथ मेसिन उपलब्ध गराउँछ | Automotive News Nepal
हुन्डाईले सधै सुधारात्मक फिचरका साथ मेसिन उपलब्ध गराउँछ २६ चैत, २०७५
नारायण खड्का कन्स्ट्रक्सन सोलुसन प्रालिमा सेल्स एन्ड मार्केटिङ हेड पदमा कार्यरत छन् । कन्स्ट्रक्सन सोलुसन नेपालका लागि हुन्डाईका हेभी इक्विपमेन्टको आधिकारिक बिक्रेता हो । उक्त कम्पनीले सन् २००९ देखि नेपालमा हुन्डाईका हेभी इक्विपमेन्ट बिक्री–वितरण गरिरहेको छ । हुन्डाईको बजार र अन्य अवस्था वारेमा खड्कासँग गरिएको कुराकानी :
हुन्डाईका कुन कुन रेन्जका इक्विपमेन्ट नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् ?
हामीले विशेष गरी एस्काभेटरमै ध्यान केन्द्रीत गरेका छौ । त्यसैगरी ह्विल लोडर पनि छ । नेपालको सन्दर्भमा जति पनि निर्माण कार्य हुन्छ, त्यसमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी प्रयोग एस्काभेटरकै हुन्छ । तर यसको रेन्ज भने फरक हुन सक्छ । हामीसँग ३.५ टनदेखि ५२ टन सम्म रेन्जका एस्काभेटर छन् । यद्यपि सबैभन्दा बढी माग साढे २२ टनको छ । कन्स्ट्रक्सन, माइनिङ, स्यान्ड वासिङ, क्रसर उद्योग आदि धेरै माग हुने क्षेत्रमा साढे २२ टनको एस्काभेटर प्रयोग हुन्छ ।
बजारको मागका आधारमा हाल हुन्डाईको अवस्था कहाँ छ ? यसको वारेमा जानकारी दिनुस् न ।
सन् २०१५ यताको बिक्रीको तथ्यांकका आधारमा एस्काभेटरमा हामी नम्बर वान पोजिसनमा छौ । हामीसँग ब्याकहो लोडर नभएकाले एस्काभेटर र ह्विल लोडरलाई मात्र गणना गर्छौ । यसका विभिन्न कारण छन् । हुन्डाई कोरियन ब्रान्ड हो । भारतको पुनेमा यसको प्लान्ट छ । नेपालमा भारतबाटै यी मेसिन आयात हुन्छन् । नेपालको माटो सुहाउदो एस्काभेटर कम्पनीले निर्माण गरेर उपलब्ध गराइरहेको छ । स्पेयर पार्ट्सको सहज उपलब्धता, कम मर्मत खर्च र सबैजसो हेभी वर्कसपका मेकानिक्सले सहज तरिकाले मर्मत गर्न सक्ने भएकाले पनि हुन्डाईका इक्विपमेन्टको प्रयोग बढेको हो । यसका लागि आधुनिक सफ्टवेयरको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । यी सबैका कारण हुन्डाईको अवस्था राम्रो भएको हो ।
नम्बर वान भन्ने आधार के ?
बजारमा धेरैले धेरै प्रकारका तथ्यांकको आधारमा आफूलाई नम्बर वान दावी गर्छन् । एस्काभेटर मात्रको सेगमेन्टमा हामी नम्बर वान भन्छौ । बजारको डाटालाई संकलन गर्दा पनि यो तथ्य प्रमाणित हुन्छ । आगामी दिनमा समेत हामी यही स्थानमा रहनका लागि प्रयत्नरत रहने छौ ।
बजार प्रतिस्पर्धात्मक छ । नम्बर वानमै कायम रहनु पनि छ । यसका लागि के योजना बनाउनु भएको छ ?
हाम्रो मूख्य ध्यान बिक्री पछिको सेवामा छ । हिजो पनि थियो र यो भोलि पनि जारी रहने छ । यसका लागि आवश्यक नेटवर्किङ बढाउने छौ । ब्रान्च थप्ने छौ । तुरुन्तै सर्भिसिङ होस् र मेसिन आइडल नबसोस् भन्नेमा ध्यान दिनेछौं । प्रतिस्पर्धा जहाँ पनि हुन्छ । हिजो हुन्डाईको मेसिन र यसको सर्भिसिङबाट सबै ग्राहक सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धता छ । उहाँहरुले नै अन्यलाई हाम्रो वारेमा जानकारी प्रदान गर्नुभएको छ । आगामी दिनमा समेत यही कार्य जारी रहने छ ।
बिक्री पछिको सेवाका लागि कस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ ?
हेभी इक्विपमेन्टहरु सहर भन्दा गाउँतिरै बढी चल्छन् । सिमेन्ट फ्याक्ट्री, ढुंगा खानी, सडक आदि सहर भन्दा गाउँमा बढी हुन्छन् । यसले गर्दा हेभी इक्विपमेन्टको प्रयोग पनि गाउँमा बढी हुन्छ । तर पनि हामी डोर टु डोर सर्भिस अर्थात साइट सर्भिस उपलब्ध गराउन प्रयत्नरत छौ । हामीले मेसिनका लागि २ हजार घण्टा वा १ वर्ष वारेन्टी दिन्छौ । वारेन्टी पिरियड सम्म कन्ट्रयाक्टरको मेसिन जुन अवस्थामा जुन स्थानमा छ, हाम्रा मेकानिक्सले त्यही पुगेर सर्भिस उपलब्ध गराउछन् । यसका लागि देशका विभिन्न स्थानमा हामीले ब्रान्च तोकेका छौ । नजिकको साइटबाट मेकानिक्स जान्छन् ।
हुन्डाई इक्विपमेन्टका युनिक फिचर के छन् ?
हुन्डाई जहिले पनि सुधारात्मक छ । मेसिनमा पनि पहिले भन्दा सुधार गर्दैछ । करिब एक वर्ष अगाडि आएको मेसिन र अहिले आएको मेसिनमा फरक हुन्छ । करिब ६ महिनामा नयाँ सुधारका साथ मेसिन आउछ । के के सुधार आवश्यक छ भनेर कम्पनीले अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ । जस्तो कि गत वर्ष भन्दा अहिले आएको एस्काभेटरको क्याबिन थप सुविधायुक्त छ । अपरेटरको बसाई थप सहज भएको छ ।
मूल्यको अवस्था कस्तो छ ?
हुन्डाईका मेसिन ७० लाख देखि माथिका मूल्यमा उपलब्ध छन् । १४ टनको हुन्डाई १४० एलसी–९ मोडलको मेसिनको मूल्य ७० लाख रुपैयाँ देखि प्रारम्भ हुन्छ । अर्को २२० मोडलको मूल्य ९५ लाख रुपैयाँ छ । त्यो भन्दा माथि १ करोड ५० लाख देखि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ सम्मका मेसिन पनि नेपालमा उपलब्ध छन् ।
ग्राहकले ब्रान्ड छान्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो ?
ब्रान्ड छान्दा सबैभन्दा पहिले गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । कुन ब्रान्ड गुणस्तरीय छ भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ । त्यसपछि बल्ल मूल्यको कुरा आउछ । अनि सर्भिस र स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धतामा ध्यान दिनुपर्छ । समयमै सर्भिस हुन्छा वा स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धता छ कि छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
हुन्डाईले मेसिन उत्पादन गर्दा पनि गुणस्तरलाई नै जोड दिएको छ । त्यसपछि बल्ल मूल्यको कुरा हुन्छ । बिक्री पछिको सेवाका लागि दक्ष टेक्निसियन र इन्जिनियरको व्यवस्था गरेको छ । स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धता सहज छ । आगामी दिनमा समेत यस्ता कार्यमा ध्यान केन्द्रीत गर्नेछ ।
यामाहाले ल्यायो ‘सेल्फी खिचौं न’ फेसबुक कन्टेस्ट
काठमाडौं – नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु...
फक्सवागनले २०२६ मा अन्तिम पेट्रोल डिजेल कार उत्पादन गर्ने
डिजेलगेट स्क्यान्डलका कारण चर्चामा आइरहने कम्पनी फक्सवागनले कम्बसन पावर भेइकलको...
हेटौंडा-धुलिखेल विद्युतीय बस सञ्चालन हुने
हेटौंडा — वागमती प्रदेश सरकारले सरकारी स्वामित्वमा हेटौँडा—धुलिखेल व...
गाडी कम्पनीको वर्कशपमा सुविधा दिन प्रतिस्पर्धा, कसको के सुविधा ?
केहि बर्ष अघिसम्म अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको प्रमुख प्राथमिकता सेल्स अर्थात बिक्रीम...
के छ फरक एमजी हेक्टर प्लस र हेक्टरमा ?
एमजी हेकटर इन्डियाले नयाँ एसयूभी हेक्टर प्लस लन्च गरेको छ । सो एसयूभी मूलरुपले ए...
स्याकार सेफ्टी राइडिङ ट्रेनिङ सेन्टरमा प्रशिक्षण शुरु, २५ प्रतिशत छुट अफर
टु ह्विलर अर्थात बाइक र स्कुटर सम्बन्धी प्रशिक्षण संचालन गर्दै आएको स्याकार सेफ्...